Yintoni eyenzekayo kuAhsoka Tano Ngaphambi kwesiqendu III?
Uhambo lwe-Anakin's Apprentice ukusuka kwi-"Clone War" kwi "Episode III"
UAnakin wayenomfundi? Kutheni kungekhona uAhsoka Tano ekhankanywe kwi "Star Wars Isiqendu III: Impindezelo yeSith?" I-Clone Wars Era kwi- Star Wars I-Expanded Universe ineengxaki ezininzi zokuqhubeka. Uninzi luvela kwinto yokuba ixesha lide liphezulu lenkxaso yeendaba kwixesha leNqabana ye- Star Wars , kunye neetekisi ezininzi zeemifanekiso, imidlalo yevidiyo, iireveli kunye namahlaya afakwe kwixesha leminyaka emithathu.
Njengoko amanye amabali, imeko kunye nabalinganiswa beza kwenziwa, izinto eziphikisanayo ziyavela.
Iyona nto inokubambisana ngayo le mibambano ebonakalayo indima ye- Ahsoka Tano , intsha yase-Togruta Padawan. Ngokusekelwe kwiiNkcukacha zeNkqubela zeNkwenkwezi zangaphambili, kwabonakala ngathi uchungechunge luqale ngo-19.5 BBY kwaye lwaphela ngaphambi kwe-BBY ye-19 xa "Isiqendu III: Ukubuyisela iSith" kusekwe. Kwaye kwakungekho zibonakaliso kwifilimu okanye kumabonakude ngelo xesha le-Ahsoka, okanye nokuba iAnakin wayenomfundi.
Ulungelelwaniso oluthile kumgca wesikhathi lubeka ukuqala kweedyuli malunga ne-BBY 21, kodwa oku kuphakamisa imibuzo engaphezulu; Ngokuqinisekileyo u-Anakin wafunda iminyaka emibili kubalulekile ukuba akhankanywe, nokuba ngaba umfundi onokubakholelwa kwiinyanga ezimbalwa angakhohliwe lula.
Kwathatha iminyaka embalwa ukuba "I-Clone Wars" uchungechunge lweTV, iincwadi, kunye nezinye izinto kwi-inyama ngaphandle kwendlela ka-Ahsoka ngeli xesha. Nantsi indlela eyadlala ngayo.
Ilumkiso: Abaphangi baya phambili!
I-Ahsoka Five's Way - I-Clone Wars kwisiqendu III
U-Ahsoka Tano wabelwa yi-Master Yoda ukuba abe ngumfundi we-Anakin Skywalker eneminyaka eyi-14. U-Yoda wayenethemba lokuba utitshala uya kuncedisa ukuphuhliswa kwengqondo ka-Anakin aze amkhuphe kude naye. Uqale wajoyina i-Skywalker no-Obi-Wan Kenobi kwi-Battle of Christophsis.
I-adventure yakhe elandelayo kunye no-Skywalker noKenobi befuna ukufuna uYabha unyana kaHutt, owayethunjiwe kwisiqwenga sokumisa iHutt malunga neJedi. Le ntengiso yayiquka iMfazwe yaseTeth kwaye idibana ne-Acolyte Asajj Ventress.
Wachitha iminyaka emibini ezayo ngexesha lama- Clone Wars anamava amaninzi kunye ne-Skywalker, njengoko ichazwe kwiichungechunge ze-Clone Wars TV. Kwisiqendu se-16, "iStartar of Mortis," unesiphelo esicacileyo esicatshulwe nguNyana. Ufa kodwa uyavuswa ngokumangalisayo nguMntombi.
Xa uneminyaka eyi-16, u-Ahsoka uqulunqwe ngumhlobo wakhe uBarriss Offee ngenxa yokuqhubhisa ibhomu kwiJedi Temple kwiCoruscant. U-Skywalker ukholelwa ukuba umsulwa kodwa uyamlandela xa ebalekela. IJedi Council ikhupha. Uvavanywa yiRiphablikhi ngenxa yoluphulo-mthetho kodwa uhlulwa yi-Offee.
IJedi Council yammema ukuba abuyele kwi-Order, kodwa uyayenqaba. Uthatha isigqibo sokuba akayithandi indlela izinto eziye zenza ngayo iJedi kwaye ufuna ukufumana indlela yakhe kunye noMbutho. UYoda unombono wokufa kwakhe kwiiholo zeJed Temple ngexesha elizayo iJedi Purge. I-Skywalker igxeka i-Jedi Council ngenxa yokungamthembi, enye inyathelo elingaphambili endleleni yakhe emnyama.
Ngaba u-Ahsoka Tano Wafa kwiJedi Purge njengoYoda Foresaw?
Phantse kamva, uAhsoka useyindlela yokuqala yeSith Lord Maul.
Unentlanganiso yakhe yokugqibela kunye no-Anakin Skywalker kwaye unikwa izibane ezidala. Kwakhona ufumana umyalelo womkhosi wamagosa, aholwa nguRex. Unqande iMangalore kwaye unomphepheli kunye noMaul, embethe kwi-shield ye-ray.
Umbono kaYoda wexesha lakhe kwiJedi Purge ibonakala yinto yokufa. Xa uKhansela uPalpatine unikela i-Order 66, eqondisa ama-clones ukuba abulale abaphathi babo be-Jedi, uRex ususile i-inhibitor chip kwaye uyakwazi ukusinda naye. Bazifakela ukufa kwabo. Ubalekela kwi-Out Rim njengokuba i-saga ingena kwi-Age yobukhosi.
Ukusinda kwakhe kwavula indlela yakhe indima kwiNgqumbo. Uhambo lwakhe phakathi kwale miba mibili lufakwe kwiveli, "Iimfazwe zeNkanyezi: Ahsoka," epapashwe ngo-Oktobha 2016. Uphinde abuyele kwi "Star Wars: Rebels." Imdidlalo eqhubayo yeTV.
Ngaba i-Ahsoka Tano Die kwiMalachor 17 Iminyaka kamva?
Kwiminyaka elishumi elinesibhozo emva koko, u-Ahsoka ubandakanyeka kwiiLabhaqa kwaye unombono ka-Anakin Skywalker ngokusebenzisa uMbutho, xa ehlekisa ngaye ngokumshiya kunye nokuba yinto ebalulekileyo ekuhambeni kwakhe.
Uyamkela ukuba ube nguDarth Vader. Emva koko udibana naye kuMalachor kwaye bahlanganyela ekulwa. Ubona inxalenye ebusweni bakhe njengoko eqaqambile inxalenye yesicaka sakhe kwaye anqume ukuba angashiyi. UVader uthi ngoko uya kufa, kwaye itempile bavalele kwaye baqhube. IVader iphila. Kungenzeka ukuba u-Ahsoka wafa okanye ukuba naye waphila. Njengoko kubonakala ngokuphindaphindiweyo, iindlebe zokufa kwakhe zinokunyanyiswa.
Imidwebo Yenene Imnandi Ukukhanyisa Imimoya Yakho
IiNkqubo zeeKholeji zeKholeji ze-Inthanethi zinikela ngokuBhalisa okuvulekileyo
Ngaba iHollywood inenkinga yeengxaki?